pandora May 5, 2009 at 6:31 PM
a lovely essay. :)
JuneOne May 5, 2009 at 9:53 PM
Ko Boyz May 5, 2009 at 10:25 PM
အပြုံးပန်း May 5, 2009 at 11:38 PM
khin oo may May 6, 2009 at 12:33 AM
တန်ဘိုးသိသူလက်ထဲကို ပြန်ရောက်သွားမှာပါ ယုံကြည်တယ။်
tg.nwai May 6, 2009 at 12:38 AM
ကောင်းလိုက်တာ သက်ဝေ..အသေးစိတ်ရေးဖွဲ့တတ်လိုက်တာ..။ တန်ဖိုးဆိုတာကိုလည်း တွေးတော စဉ်းစားသွားမိပါတယ်..။
Moe Cho Thinn May 6, 2009 at 1:00 AM
ပစ္စည်းလေးတွေကို ရိုရိုသေသေ သုံးဖို့ သတိရသွားတယ်။ အိမ်ရောက်ရင် တံခါးလေး ဖုန်သုတ်အုံးမှ။
ပုံရိပ် / Pon Yate May 6, 2009 at 7:58 AM
မသက်ဝေ စိတ်ကူးလေး ကောင်းတယ်။ တံခါးရွက်လေးကို ကိုယ်ချင်းစာသွားတယ်။
ကဗျာမလေး May 6, 2009 at 10:11 AM
သက်မဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရဲ့ တန်ဖိုးကို သက်ရှိလူသားတွေက သတ်မှတ်ပေးကြတယ် ... သက်ရှိလူသားတစ်ဦးစီရဲ့ တန်ဖိုးကိုတော့ မိမိကိုယ်တိုင်ကပဲ သတ်မှတ်ကြရမယ်ထင်ပါတယ်။
Hmoo May 6, 2009 at 11:54 AM
Thanks for hope and encouragement post..
Appreciate Ma Thet Wai
ပန်းခရမ်းပြာ May 6, 2009 at 1:02 PM
တခါးရွက်လေးကို သနားသွားတယ်။ လက်ကိုင်ဘုနဲ့ သော့ကိုတော့ စိတ်နာတယ်။ လောလော လတ်လတ် သော့ပြင်သမားကို S$70 ပေးလိုက်ရလို့လေ။
T T Sweet May 6, 2009 at 8:08 PM
အတွေးကောင်း အရေးကောင်း အက်ဆေးလေးလဲ သိပ်ကောင်း။ မဝေဒီလောက်စာရေးကောင်းမှန်း အစကလုံးဝ မသိခဲ့ပါ။
P.Ti May 6, 2009 at 11:13 PM
အတွေးလေးကောင်းတယ်... အဟောင်းဆိုင်မှနေ ရှေးဟောင်းပန်းပု အတု လုပ်တဲ့နေရာမှာ အင်မတန် အသုံးဝင်လောက်ပါတယ်။
ရွှန်းမီ May 30, 2009 at 9:20 PM
အင်း ကိုဘွိုက်ဇ် တန်ဖိုးသိပုံက တစ်မျိုးပဲ..
သက်ဝေ June 8, 2009 at 12:55 PM
ဘာကြောင့်မှန်းမသိ တံခါးတွေကို ကြည့်ရင်း စိတ်ဝင်စားလို့ ရေးနေမိတာ...
မှတ်ချက်ရေးပြီး အားပေးသွားကြသူများ အားလုံးကျေးဇူးပါ...